Waaheen Media Group » Aasaaskii Laanta Afsoomaaliga Ee BBC W/Q: Cali Cabdi Coomay
Browse:Home Articles Aasaaskii Laanta Afsoomaaliga Ee BBC W/Q: Cali Cabdi Coomay
Published by Waaheen Media on July 17, 2017 | Comments Off on Aasaaskii Laanta Afsoomaaliga Ee BBC W/Q: Cali Cabdi Coomay
18/7/1957-kii ayaa ahayd markii la furay BBC-da, ka dib waxa ay codsi rasmi ah u soo qoratay Radhyow Hargaysa oo ka da’weynayd lana furay sannadkii 1941-kii, iyada oo ka dalbanaysay laba xubnood oo muusiga ah oo ay furitaan uga dhigto idaacada BBC-da. Idaacada BBC-da laanta Af-Soomaaliga wax hal-mar la wada furay laba laamood oo kala ahaa, Laanta ku hadasha Afka Hause oo dalka Naygeeriya lagaga hadlo iyo laanta ku hadasha Afka Sawaaxiliga oo Bariga Afrika lagaga hadlo. Ninkii ugu horreeyey ee ka hadlay Idaacadda BBC-da wuxuu ahaa Xaaji Cabdi-Ayuub. Sababtii loo furay Idaacadda BBC-da laanta Af-soomaaligu waxa ay ahayd sidii looga hortegi lahaa Idaacad gumeysi-diid ahayd oo ka furnayd dalka Masar gaar ahaan Qaahira, oo magaceeda la odhan jiray “ Sowtul-carab minal Qaahira”, oo dadkuna aad u dhegaysan jiray.
Beryahaasi Afka Carabiga ayaa aad loo yaqaannay oo wargaysyada toddobaadlaha ahaa ee Soomaalilaan ka soo bixi jiray wuxuu ku soo bixi jiray Afka Carabiga. Idaacaddaa Qaahir ka soo hadli jiray waxa ay saamayn la yaab leh ku lahayd shacabkii Af-soomaaliga ku hadli jiray ee Geeska Afrika ku dhaqanaa ee gobonnimo-doonka ahaa. Markii dambena Af-soomaali ayaa lagu daray baahintii Idaacadda sannadkii 1954-kii. Sida aynu qoraalka xaga dambe ku sheegi doono, AHN Cabdilaahi-Qarshe oo waraysi siiyey Tilifiishanka Jabuuti sannadkii 1993-kii, ayaa ka waramay muusiga furitaanka idaacadda, wuxuu sheegay in loo diray “ Socodkii Arraweelo” oo Cabdilaahi-qarshe lahaa iyo muusiga” Baar-cadde” oo uu garaacayey Maxamed Siciid Faarax oo la odhan jiray “ Gu’-Roon-Jire”.
Sababtii Muusiga Furitaanka keentay
Cabdilaahi-Qarshe AHN oo alifay heestan ay idaacada BBC-du furitaankeeda ku bilowdo, oo uu uga waramayey Cabdilaahi-qarshe Tilifiishanka Jabuutu ayuu ku yidhi” aad baan u jeclahay in aan fikraddaa dadka gaadhsiiyo. Markii BBC-da la samaynayey sannadkii 1957-kii waxaan anigu ka shaqaynayey Radhyow Hargaysa. Waxa aan ahaa Weriye idaacada ka tirsan (Broadcaster), heesaa iyo weliba Muusig tume (Musician). Markaa waxa ay BBC-du na soo weydiisatay in aanu u soo samayno codad ay idaacadda iyo barnaamijyada ku furan. Markaa kolley shucuur waddaninnimana waa ay ku jirtay, markaa heestaa oo midho lahayd ayaan u geeyey. Markaa haddaan midhihii raaciyo ma ay qaateen, sidaa darteed ayaan ugu bixiyey codkan oo magaciisu ahaa “ Socodkii Arraweelo”, oo odhanaysa sida tan:
Hadday U dhiidhiyeen.
Allahayow U Dhiib.”
19957-kii markii BBC-da la furayey ee ay codadka muusiga soo dalbatay, laba cod ayey soo codsatay. Mid wuxuu ahaa ka Cabdilaahi-Qarshe diray ee aynu ilaa maanta maqallo ee ahaa” socodkii Arraweelo”, codka kale waxa tumay oo iska lahaa Maxamed Siciid Faarax oo loo yaqaanay “ Gu’-Roon-Jire”, AHN. Wuxuu ahaa cod “Baar-cadde” ah oo marka socodka Arraweelo lagu furo laga dambaysiin jiray. Mooyi inaad u fiirsateene, maalin dhaweyd oo si qaab daran oo aad u arradan loogu dabbaal-degayey sannad-guuradii laanta Af-soomaaliga ee BBC-da ayaa codkaa iyo codkii furitaanka ee maalintii ugu horraysay ee Cabdi-Ayuubba la saaray.
Codkaa Gu’-Roon-Jire wuxuu ku jiraa waxyaabaha maamulkii godobaysanaa ee BBC-du uu joojiyey, iyada oo uu dirqi ku baxsaday muusiga socodka Arraweelo oo qudhiisa sidaan mar maqlay is-na mar la hakiyey, balse qaylo-dhaantii ka yeedhay la xejin waayey. Laanta Af-soomaaliga ee BBC-du marbay magan u ahayd Radhyow Hargaysa oo beryahaa loo yaqaannay laguna furi jiray” Halkani waa Hargaysa , Radhyow Soomaali.” Idaacadda Radhyow Hargaysa waa idaacadii ugu horaysay ee Af-soomaali ku hadasha adduunka. Qolka keydka cajaladaha ee Radhyow Hargaysa 16 sannadood ayuu ka weyn yahay qolka keydka ee Idacaadda BBC-da laanta Af-soomaaliga. Wakhtiyadii dagaaladu ka socdeen Soomaalilaan waxa badani kamuu lumin idaacadda.
Sababihii adhaxda jebiyey Keydka idaacadda BBC-da.
Iyada oo keydkii cajaladaha ee u yaallay la qubay 12 sannadood ka hor markii ay cajaladaha u rogteen” Digital-ka”, iyada oo keydkaa cajaladeed ee hodanka ee Soomaaliyeed loo qubay gobol ayaa lahaa (Soomaalilaan).
BBC-da oo si aan sugnayn oo ay adagtahay sida loo raad-raaco u suntatay waxa yare ee maant u yaal (Catalogue).
BBC-da oo aan intan dambe wax keyd ah samaysan oo inta badan ku foognayd hawlo-siyaasadeed iyo shir-ku-sheegyadii Soomaaliya lagu heshiisiinayey.
Tix-Raac: Boobe Yuusuf Ducaale: Dhaxal-Reeb, labaad, 2015.
Waxa la yidhi” Wax kasta oo dunida ku sugan waxa ay leeyihiin weji fiican iyo mid xun, miisaanku hadba dhanka uu u ciiro ayaa loo nisbeeyaa”. Hoos u dhicii ugu horreeyey wuxuu bilaabamay wakhtigii qaaday tallaabo ka yaabisay dadyowgii afsoomaaliga ku hadla ee degan geeska afrika, wuxuu shaqadii ka caydhiyey haldoorkii suxufiyiintii Soomaalida ee magacyadooda aynu xagga sare ku xusnay, waxaanu shaqada qoray weriyeyaal ay isku-deegaan yihiin, oo uu qaab reernnimo u qoray, oo ay ka mid ahaayeen
Maxaa Keenay in Kiiniya loo raro?
Sababta keentay waxa ay ahayd kharash dhimis lagu samaynayey laamo badan oo hoos iman jiray guud ahaan BBC-da adduunka la hadash, waxa ka mid ah laantii af-Hindiga iyo laamo kale oo waxa loo raray meelo ka tirsan dalalkooda oo ka kharash yar, taasina waxa ay saamaysay laantii af-soomaaliga ee BBC, markii go’aankaasi soo baxay waxa ay madaxdii sare ee BBC is-weydiiyeen, bal cidii madax ka noqdon lahayd maadaama oo soomaalidii hore madax uga noqotay ay qabyaalad geliyeen shaqaalaysiintii idaacadda iyo wararkii oo aan dheellitirnayn, dabadeedna waxa la go’aamiyey in sideedii hore lagu soo celiyo oo qof aan soomaali ahayn madax looga dhigo, sidaasi ayaa Nayroobi loogu raray, oo loo hoos geeyey laanta af-sawaaxiliga iyo habarta dhukuran ee Kaaroliin la yidhaa. Nin hooyadii ka guuray edadii uma hoydo.